China CNC machine inogadzira uye mutengesi | Mestech
Cnc machine ndiyo tekinoroji inoshandisa Computerised Numerical Control chaiyo machina chishandiso kugadzirisa workpiece. Mhando dzemuchina maturusi anoshandiswa mukugadzirisa anosanganisira CNC lathe, CNC yekugaya muchina, CNC inodinha uye yekugaya muchina, nezvimwe.
MESTECH yakagadzirirwa huwandu hwakawanda-hwekuita CNC michina yekushandisa, ine timu yakanaka kwazvo yekugadzira uye machina mainjiniya uye yakaoma maitiro. Isu tinokudzwa kupa vatengi vedu zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, kuendesa panguva yakakodzera uye masevhisi.
Machini uye indasitiri yemidziyo ndiyo mai veindasitiri yazvino. Iyo indasitiri inoita michina yekugadzira nemidziyo ndiyo indasitiri yekugadzira indasitiri. Iyo yehunyanzvi chikamu chekugadzira michina inosarudza iwo mhando yemhando yemachini nemidziyo.
Chii chinonzi chaiyo machining?
Kugadzira ndiyo nzira yekugadzira yekubvisa zvinhu kubva kune yekushandira kuti uwane chimiro chakakosha uye saizi. Machina anoshandiswa pakugadzira michina anonzi michina maturusi. Zvishandiso zvezvikamu zvemuchina zvinosanganisira simbi, isina-simbi simbi uye mamwe maumbirwo nesimbi-yakasimba simbi, pamwe nepurasitiki yakasimba uye zvigadzirwa zvehuni. Machining inogona kuwana yakakwira chaiyo zvikamu, saka tinoidaidza kuti machining. Iyo ndiyo huru yekugadzirisa nzira yekugadzira dzakasiyana muchina zvikamu.
Nekuvandudzwa kwemakomputa tekinoroji, maindasitiri edhijitari ekudzora tekinoroji inosumwa mumuchina chishandiso michina, iyo inoziva iyo digitalization uye otomatiki yemuchina chishandiso basa uye inovandudza zvakanyanya kugadzirwa kwekuita uye kugadzirisa kunyatso. Iyi mhando yehunyanzvi iyo inoshandisa komputa sisitimu kushandisa muchina chishandiso kugadzirisa inonzi nhamba yekudzora kugadzirisa tekinoroji. Muchina wekushandisa unoshandisa komputa inoshanda sisitimu inodzora muchina chishandiso (CNC muchina).
Chii chinonzi CNC machine?
CNC machine (nemazvo machine) chinhu kugadzira muitiro. Machine maturu anomhanya pasi pekutonga kwemapurogiramu emakomputa. Mapurogiramu emakomputa akaiswa makodhi kutamisa vanocheka kuti vagadzire chaiwo machina zvikamu zvinoenderana nesaizi yechirongwa chekodhi (inonzi G kodhi).
CNC machining inzira yekugadzira iyo pre-programmer komputa software inoratidza kufamba kwemidziyo yemidziyo uye michina. Maitiro aya anogona kushandiswa kudzora akateedzana michina yakaoma, kubva kune ekugaya uye matanda kusvika kumakina ekugaya uye ma routers. Kuburikidza neNC machining, matatu-mativi ekucheka mabasa anogona kupedzwa mune seti yekukurudzira.
Kazhinji, CAM (Computer Inobatsirwa Kugadzira) software inoshandiswa mumashopu mashini kuti uverenge mafaira eCAD (Computer Akabatsirwa Dhizaini) uye gadzira chirongwa cheG kodhi kudzora CNC maturusi emuchina.
Chii chinonzi CNC machine Machine Chishandiso?
CNC muchina chishandiso chishandiso chishandiso chinobatanidza general muchina chishandiso uye komputa system.
Iwo maturusi maturusi anodzorwa anosanganisira ekugaya, azvikuya michina, lathes, drills uye mapuraneti.
Mukuita kweCCC lathe kugadzira, kutsanangurwa kweCNC nzira yekugadzirisa inowanzo tevera zvinotevera nheyo:
(1) Kurongeka uye pamusoro pekuomarara kweiyo workpiece ichagadziriswa inofanirwa kuvimbiswa.
(2) Ita kuti nzira yekugadzirisa ipfupike, dzikise iyo isina chinhu yekufamba nguva uye nekuvandudza mashandiro ekugadzirisa.
(3) Ita kuti basa riverengere pakuverenga zvive nyore nyore uye gonesa maitiro ekugadzirisa.
(4) Kune mamwe mapurogiramu anoshandiswazve, subroutines inofanira kushandiswa.
Mhando dzeCNC muchina maturusi:
1.CNC hwokugaya hwakabvira michina
2.CNC machine centre.
4.Electrical Discharge CNC Machines.
5.CNC Waya Kucheka Machine
6.CNC nemazvo kukuya muchina
Magetsi kuburitsa CNC muchina
CNC Wire Kucheka Muchina
The mamiriro CNC machine
Cnc muchina unokunda discontinuity chemanyorerwo mashandiro echinyakare michina maturusi. Iyo ine yakanyanya kushanda, yakagadzikana mhando, chaiyo saizi uye otomatiki. Inokodzera kwazvo kunyatsoita uye kugadzirwa kwemhando yepamusoro. Cnc machine inzira inokosha yekuziva zvikamu zvakakwana zvekugadzira.
Kushandiswa CNC machine
1. Deredza huwandu hwemagadzirirwo uye maturusi, uye haudi maturusi akaomarara ekugadzirisa zvikamu zvine maumbirwo akaomarara. Kana iwe uchida kushandura chimiro uye saizi yezvikamu, iwe unongofanirwa kugadzirisa zvikamu zvekugadzirisa maitiro, ayo akakodzera mukuvandudza nekugadzirisa zvigadzirwa zvitsva.
2. Iyo CNC yekugadzirisa mhando yakatsiga, iko kugadziriswa kwakaringana kwakakwirira, kudzokorora kwakaringana kwakakwirira, uye inogona kusangana nezvinodiwa zvekugadzirisa ndege.
3. Iko kugona kwekugadzira kwakakwira mune yekuwandisa-dzakasiyana uye diki batch kugadzirwa, izvo zvinogona kudzikisira nguva yekugadzira kugadzirwa, muchina chishandiso kugadzirisa uye maitiro kuongorora, uye zvakare kuderedza iyo yekucheka nguva nekuda kwekushandisa kweakanakisa ekucheka huwandu .
4. Machinable akaomeswa profiles ayo akaoma kugadzirwa nenzira dzakajairika nzira, uye anogona kutogadzira zvimwe zvikamu izvo zvisingaonekwe. Mukupfupisa, iri mhando yezvikamu chaizvo zvine maitiro akaomarara uye zvidimbu zvidiki zvezvigadzirwa, senge chaiyo maekisero, optical fiber muswe mapani, mapini zvichingodaro, izvo zvinokodzera.
Kambani yeMestech inopa vatengi iwo chaiwo machining masevhisi eakasiyana esimbi, epurasitiki zvikamu. Kana iwe uchida rumwe ruzivo, ndapota taura nesu.
Pashure: Kufa kukanda zvikamu
Zvadaro: Zvigadzirwa zvemuchina
Cnc Machining epurasitiki Zvikamu